WINDOWS တွင်ဒေသခံတစ်ဦးကွန်ယက်ကိုထူထောင်ဖို့ကိုဘယ်လို7- WINDOWS ကို - 2019
Windows7မှာ local ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်ခြင်းနှင့်တက် setting
TAR.GZ - Ubuntu ရဲ့ operating system ကိုအတွက်အသုံးပြုသည်တစ်ဦးစံဖိုင်အမျိုးအစား။ ဒါဟာပုံမှန်အားဖြင့် installation သို့မဟုတ်ကွဲပြားခြားနားသော repositories ကများအတွက်အစီအစဉ်များကိုသိမ်းဆည်းထားသည်။ ဤ extension ၏ဆော့ဖ်ဝဲကို Install လုပ်ရလွယ်ကူပြီးမဟုတ်ကအထုပ်များနှင့်စုဝေးဖို့လိုအပ်ပေသည်။ ဒီနေ့တိုင်းလိုအပ်သောအရေးယူဆောင်ရွက်မှုခြယ်ဘဲလျက်ရှိသမျှသောပညတ်တော်တို့ကိုနှင့်ခြေလှမ်းများဖြင့်အသေးစိတ်အတွက်ဒီဆောင်ပုဒ်ဆွေးနွေးရန်ချင်ပါတယ်။
Ubuntu မှာ Set TAR.GZ archive ကို
ကိုဖြည်၏အလွန်လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်နဲ့ပြင်ဆင်မှု software ကိုအဘယ်သူမျှမကြီးတွေသဘောတူညီချက်ဖြစ်ပါသည်, အရာအားလုံးကိုတစ်ဦးစံမှတဆင့်ပြု "Terminal နှင့်" အပိုဆောင်းအစိတ်အပိုင်းများ pre-တင်။ အဆိုပါတပ်ဆင်ခြင်းနှင့်အတူအဘယ်သူမျှမပြဿနာတွေ unzipping ပြီးနောက်တစ်အလုပ်လုပ် archive ကိုကောက်ဖို့အဓိကအရာ။ သို့သော်ညွှန်ကြားချက်မတိုင်မီကျနော်တို့ကဂရုတစိုက် RPM-packages များသို့မဟုတ်တရားဝင် repositories က၏ရှေ့မှောက်တွင်သို့မဟုတ် deb များအတွက်အစီအစဉ်ကိုဆော့ဖ်ဝဲရေးသူ၏တရားဝင် website ကိုလေ့လာဖို့လိုအပ်ကြောင်းထောက်ပြချင်တယ်။
ထိုကဲ့သို့သောအချက်အလက်များ၏ installation ကိုအများကြီးပိုလွယ်စေနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြားဆောင်းပါး၌မဘတ် RPM-packages များ၏ installation ရဲ့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအကြောင်းကိုပိုမိုအသေးစိတ်ငါတို့သည်လည်းပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းကိုသွားပါ။
ကိုလည်းကြည့်ပါ: Ubuntu မှာ RPM-packages များတပ်ဆင်ခြင်း
အဆင့် 1: အပိုဆောင်းကိရိယာတပ်ဆင်ခြင်း
task ကိုထွက်သယ်ဆောင်ရန်, သင် archive ကိုအတူအပြန်အလှန်မတိုင်မီ loaded ခံရဖို့တစ်ဦးတည်းသာ tool ကိုလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဟုတ်ပါတယ်, Ubuntu ကိုပြီးသား built-in compiler ရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့် packages များဖန်တီးတည်ဆောက်ရန် tool များ၏ရရှိနိုင်မှုဖိုင်မန်နေဂျာများကထောက်ခံနေတဲ့သီးခြားအရာဝတ္ထုအတွက်ဖိုင်ကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်။ ထိုကြောင့်သင်တို့ကိုအဘယ်သူမျှမပိုဖိုင်တွေထွက်ခွာအခြားအသုံးပြုသူများ deb-အထုပ်လွှဲပြောင်း, ဒါမှမဟုတ်လုံးဝကိုကွန်ပျူတာထဲကနေအစီအစဉ်ကိုဖျက်ပစ်နိုင်ပါလိမ့်မည်။
မီနူးနဲ့ပြေးဖွင့်ပါ "Terminal နှင့်".
အမိန့်ရိုက်ထည့်ပါsudo checkinstall တည်ဆောက်-မရှိမဖြစ် autoconf automaker install apt-getလိုအပ်သောအစိတ်အပိုင်းများကိုထည့်ပါ။
အဆိုပါဖြည့်စွက်အတည်ပြုဖို့အဓိကအကောင့်ကနေ password ကိုရိုက်ထည့်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
ကို Select လုပ်ပါ : Dဖိုင်တွေထပ်ထည့်ဖို့စစ်ဆင်ရေးကိုဖွင့်ရန်။
အဆိုပါ input ကိုလိုင်းပေါ်လာသောအရာပြီးနောက်, လုပ်ငန်းစဉ်ကိုအပြီးသတ်ဖို့မျှော်လင့်ထား။
နောက်ထပ် utility ကိုအမြဲအောင်မြင်သောကို install ၏လုပ်ငန်းစဉ်, ဒါကြောင့်ဒီအဆင့်ကိုအဘယ်သူမျှမပြဿနာများရှိသည်သငျ့သညျ။ လာမယ့်ခြေလှမ်းများပြောင်းရွှေ့ဖို့။
အဆင့် 2: program ကိုအတူ archive ကိုဖွင့်နေသည်
အခုဆိုရင်သင်တစ်ဦးရှိပါတယ်သိမ်းဆည်းထားကာ archive ကိုမှ device ကိုချိတ်ဆက်သို့မဟုတ်သင့်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ဖိုလ်ဒါတစ်ခုအနေနဲ့ object ကိုဒေါင်းလုတ်လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ထို့နောက်အောက်ပါညွှန်ကြားချက်မှဆက်လက်ဆောင်ရွက်:
ဖိုင်မှတ်တမ်း Manager ကိုဖွင့်ပါနှင့်ဖိုင်သိုလှောင်မှုဖိုင်တွဲ navigate ။
ညာဘက်မောက်စ်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီး select လုပ်ပါ "Properties ကို".
TAR.GZ ဖို့လမ်းကိုလေ့လာပါ - က console ကိုကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ထွက်သယ်ဆောင်ရန်အသုံးဝင်သည်။
စတင် "Terminal နှင့်" နှင့် Command ဖြင့်ဖိုင်သိုလှောင်မှု directory ကိုမှ navigatecd / home / user က / folder ကိုဘယ်မှာ အသုံးပြုသူ - အသုံးပြုသူအမည်, နှင့် ဖိုငျတှဲ - directory ကို၏အမည်ကို။
ကတ္တရာစေးရေးသားခြင်းအားဖြင့် directory ကိုထဲကဖိုင်တွေကို Extract-xvf falkon.tar.gzဘယ်မှာ falkon.tar.gz - archive ရဲ့အမည်ဖြစ်တယ်။ မဟုတ်မှသာနာမည်ထည့်ရန်သေချာစေပါပေမယ့်လည်း.tar.gz.
ကိုယ်ကသာသင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာပေါ်မှာနောက်ထပ်ပုံမှန် software ကိုတပ်ဆင်ခြင်းဘို့တ deb-အထုပ်ထဲမှာဖိုင်တွေအားလုံးကိုစုဆောင်းရန်ကျန်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။
အဆင့် 3: ရေးသားထား deb-အထုပ်
ဒုတိယအဆင့်မှာ, သင် archive ကိုအထဲကဖိုင်တွေဆွဲထုတ်ခဲ့ကြပြီးပုံမှန် directory ထဲတွင်သူတို့ကိုထားပေမယ့်သူကထို program ၏ပုံမှန်လုပ်ငန်းဆောင်တာကိုသေချာမထားဘူး။ ဒါဟာယုတ္တိအမြင်ပေးခြင်းနှင့်သင့်လျော်သော installer ကိုအောင်စုဆောင်းထားရမည်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့, စံပညတျကိုသုံးပါ "Terminal နှင့်".
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ unzipping ပြီးနောက် console ကိုကိုဖုံးလွှမ်းမ command ကိုမှတဆင့် folder ကိုတိုက်ရိုက်သွားပါcd falkonဘယ်မှာ falkon - လိုချင်သော directory ကို၏အမည်ကို။
ပုံမှန်အားဖြင့်, အသင်းတော်အတွက်စုစည်းအကောင်အထည်ဖေါ်ရန် script များပြီးသားရှိပါတယ်, ထို့ကြောင့်သူကပထမဦးဆုံးစစ်ဆေးမှုများ command ကိုမှအကြံပြုလိုတယ်./bootstrapနှင့်ချွတ်ယွင်းအသုံးပြုမှု၏အမှု၌./autogen.sh.
နှစ်ဦးစလုံးအသင်းများကို Non-အလုပ်လုပ်ခဲ့ကြသည်ဆိုပါကလိုအပ်သော script ကိုထည့်သွင်းဖို့လိုအပ်ပေသည်။ တသမတ်တည်း console ကို command ကိုရိုက်ထည့်ပါ:
automaker --gnu --add-ပျောက်ဆုံး --copy --foreign
-Wall -f autoconf
အသစ်က packages များ၏ထို့အပြင်စဉ်အတွင်းစနစ်အချို့စာကြည့်တိုက်များကင်းမဲ့ကြောင်းဖြစ်နိုင်သည်။ သင့်အနေဖြင့်တစ်ဦးအကြောင်းကြားစာကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ် "Terminal နှင့်"။ ပျောက်ဆုံးနေတဲ့စာကြည့်တိုက် Install, ထို command ကိုသုံးsudo namelib apt installဘယ်မှာ namelib - အလိုရှိသောအစိတ်အပိုင်း၏အမည်။
ယခင်ခြေလှမ်းပြီးစီးပေါ်၌ command ကိုရေးသားခြင်းအားဖြင့်စုစည်းဖို့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်အောင်။ ညီလာခံအချိန် folder ထဲမှာအချက်အလက်များ၏ပမာဏပေါ်မူတည်ဒါ console ကိုကိုဖုံးလွှမ်းနှင့်အောင်မြင်သော compiler ၏အသိပေးချက်ကိုစောင့်ဆိုင်းကြဘူး။
အဆင့် 4: အချောအထုပ် Install
ပြီးသားအစောပိုင်းကဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်း, လျှောက်ထားနည်းလမ်းကိုမဆိုသမားရိုးကျနည်းလမ်းများအားဖြင့်အစီအစဉ်ထပ်မံတပ်ဆင်မှုအတွက် deb-အထုပ်တစ်ခု archive ကိုဖန်တီးရန်အသုံးပြုသည်။ အထုပ်ကိုယ်နှိုက် TAR.GZ သိမ်းဆည်းထားရှိရာအတူတူ directory ထဲတွင်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်နှင့်သီးခြားပေါ်မှာ install လုပ်ပါရဲ့ဖြစ်နိုင်ချေနည်းလမ်းများအောက်က link ကိုမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆောင်းပါးဖတ်ပါ။
ကိုလည်းကြည့်ပါ: Ubuntu မှာ deb-အထုပ် Installing
သငျသညျဆန်းစစ်မော်ကွန်းတိုက် install လုပ်ရန်ကြိုးစားသည့်အခါကသူတို့ထဲကအချို့တိကျသောနည်းလမ်းများစုဆောင်းခဲ့စဉ်းစားရန်လည်းအရေးကြီးပါသည်။ အပေါ်ကလုပ်ထုံးလုပ်နည်း, အလုပ်မလုပ် TAR.GZ decompressed ဖိုင်တွဲသူ့ဟာသူအတွက်ကိုကြည့်အဲဒီမှာဖိုင်ကိုတွေ့ပါမပါဘူးဆိုရင် Readme သို့မဟုတ် Installတပ်ဆင်၏ဖော်ပြချက်ဖတ်ပါရန်။